Mpanamboatra satroka azo araraoty - orinasa mpamokatra sy mpamatsy kapoaka azo ampiasaina any Sina
Tombo-kase vita amin'ny foil vita amin'ny ronono vita amin'ny embossed kapoaka fanary 0,030 ka hatramin'ny 0,050 mm
tombo-kase tampon-kazo tampoka eo no ho eo miaraka amina velarana 0,030 ka hatramin'ny 0,050 mm, miaraka amina karazana lakroa famehezana na horonantsary famehezana mba hiantohana ny famehezana tsara sy hermetika amin'ny polypropylene (PP), polystyrene (PS) ary polyethylene thermoformed na injected container.
LOGO Printed Instant Noodle Bowl sarony mora rovitra
Mora misintona PE embossed Disposable Cup Lids Ho an'ny tombo-kase tombo-kase tombo-kase haingana
Ny maty maty dia nanapaka ny sarony tamin'ny alàlan'ny malama ny tampony, ary misy endrika kely ihany ao amin'ny faritra misy ny tombo-kase. Hita amin'ny hateviny sy endrika maro.
Sarony famehezana sarimihetsika PE plastika azo ampiasaina plastika
Anarana: Sarony Noodika Instantika plastika
Fitaovana: Eva, Pe, taratasy naoty naoty sakafo
36-46 micron PET Heat Seal Disposable Cup Lid fonosana fonosana
PET Heat Seal Die Cut Lids dia safidy malaza amin'ny rakotra aluminium. Ny kalitaon'ny fanontana azo tratrarina dia avo kokoa satria fotsy ny tampon'ny plastika mamela ny kalitaon'ny sary sy ny famaritana ny loko. Rehefa PET mangarahara na mazava miaraka amin'ny lacquer misy tombo-kase no ampiasaina, dia azon'ny mpanjifa atao ny maka sary an-tsaina ny vokatra fonosana ka mahatonga azy io ho fitaovana tena be mpampiasa.
Tombo-kase vita amin'ny PET vita amin'ny petaka ho an'ny sarony lovia kely Noodle azo ampiasaina
Saron'ny tombo-kase PET ho an'ny lovia mofomamy eo noho eo dia mety amin'ny vokatra mitaky sakana misy oxygen sy rano.
yaourt foil vita amin'ny aluminioma rakotra tavoahangy eo no ho eo
Ho an'ny fonony yaorta, io dia karazana fonosana avy amin'ny foil aluminium izay natao hamehezana ny kapoaka ps ho an'ny fonosana yaorta.
Loko 8 tsy handoavam-boninkazo yaourt Lid Cup Cup Cut Cut
Ity Yogurt Lid ity dia mampiasa maodely miloko CMYK amin'ny famolavolana loko, mba hahafahanay manome fanontana miloko 8. Manaiky baiko manokana ny orinasanay, fa noho ny antony manelingelina sasany toy ny hazavana sy ny aloka dia mety misy fihoaram-pefy chromatic amin'ny vokatra vita, fa manome toky izahay fa hitazona farafaharatsiny ny fanitsakitsahana chromatic.
Taratasy tombo-kase taratasy fisakafoana ho an'ny kaopy PP, PS, PE, PET
Fampidirana ny rakotra tombo-kase taratasy 1. Sarony tombo-kase ho an'ny tavoahangy plastika PE, PP, PS ary PVC. 2. Ampiasaina amin'ny kaopy PP, PS, PE, PET. 3. Sakafo ara-tsakafo 4. Mihoatra ny 18 taona ny traikefa 5.SGS, BV, fanamarinana ISO 6. Fandefasana haingana sy serivisy tsara indrindra Parameter of Taratasy taratasy tombo-kase Product anarana Sakafo Kilasy taratasy tombo-kase ho an'ny PP, PS, PE, kaopy PET akora vita amin'ny akora baoritra, adhesives, sarimihetsika, ranomainty, solvent, sns rafitra fanarenana PET + PAPER + PE + FOIL + Horonantsary famehezana hafanana ho an'ny PS / PP / PE / PET / Kopy taratasy PAPER + PE + FOIL + ...